မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: သူတို့နာမည် … သူတို့ဘ၀ (၁)
သူတို့နာမည် … သူတို့ဘ၀ (၁)
ကျွန်တော်သည် ဗေဒင်ဟောဆိုခဲ့သည့် သက်တမ်းတစ်လျှောက် တွင် အချို့သော နာမည်ရှင်များ နှင့် သူတို့၏ ဘ၀လေးများကိုလည်း မှတ်မှတ်ထင်ထင် ….ရှိခဲ့ရပါသည်။ ယင်းတုိ့ထဲမှ အချို့သော နာမည်ရှင်များနှင့် …….ဘ၀ဖြစ်စဉ်အနှစ်ချုပ်ကလေးများကို …သတိပြုလေ့လာနိုင်စေရန် ယခုဆောင်းပါးကို ရေးသားအပ်လေသည်။ ယင်းသို့ရေးသားဖော်ပြရာတွင် နာမည်ဖော်ပြရန်မသင့်သော သူအချို့ကိုမူ ..နာမည်၏ နေ့နံများဖြင့်ဖြစ်စေ … အနဲငယ်ပြောင်းလဲပြီး ဖြစ်စေ ဖော်ပြရေးသား တင်ပြပေးထားပြီး၊ ကျန်နာမည်ရှင် ဇာတာရှင်များကိုမူ …နာမည်အရင်းများအတိုင်း ….ဘ၀ဖြစ်စဉ်အမှန် အတိုင်း သုံးသပ်ရေးသား တင်ပြပေးလိုက်ရပါကြောင်း။
တစ်ခုကြွင်းဖွား တနင်္လာသား ပုတိဖွား ဇာတာရှင်
အမည်အမျိုးအစား သာမိကာရက အမည်
အမည်အဖျားစာလုံးသည် (မွေးနံဂြိုဟ်လည်းဖြစ်သည့်) တနင်္လာနံ ဖြစ်ပြီး ပုတိဌာနတွင် မဟာဘုတ်ကသစ်မူပြီး ရပ်တည်ထားသည်။ အမည်သည် ….အမြင့်ပိုင်း ပညတ်များဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားပြီး …နာမည်အဖျားစာလုံးသည် စနေဂြိုဟ် ဖြင့် ပက္ခမိသည်။ အဆိုပါစနေဂြိုဟ်သည် ပင် ဇာတာရှင် တနင်္လာသား အတွက် မေတ္တာရေးကာရက ဂြိုဟ် လည်း ဖြစ်နေ၏။
နာမည်အဖျားစာလုံး သို့တည်းမဟုတ် မွေးနံ ….ပုတိဌာနတွင် အားကောင်းစွာ ရပ်တည်ထားခြင်း ၊ ယင်းရပ်တည်သော ဂြိုဟ်သည် …ချစ်ခင်နှစ်လိုမှုကို အစိုးရသော တနင်္လာဂြိုဟ် ဖြစ်နေခြင်း တို့ကြောင့် ….လူတို့၏ ချစ်ခင်နှစ်သက်မှု ကို လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်သော ဇာတာရှင်မျိုး ဖြစ်လာစေမည်။ မိခင် ၊ ယာဉ်ရထား၊ ခြံမြေ၊ အမွေအနှစ် တို့ကို ခံစားရမည်။ စနေနှင့် ပက္ခမိထားခြင်းကြောင့် …..ဘ၀တွင် မိမိတာဝန်မဟုတ်သော တာဝန်များကို …အစဉ် ထမ်းနေရတတ်ပြီး ၊ မေတ္တာရေးတွင် …ကမောက်ကမ ဖြစ်စဉ်များ ပါဝင်နေမည်။ တနင်္လာအားကောင်းလွန်းပြီး ….မွေးနံ ဖြစ်နေခြင်း က …..ဘ၀ကို ပျော်သလို နေသွားမည် ။ ပျော်ရာမှာသာ နေသွားမည် ကို အတိအကျ ဖော်ပြနေပေသည်။
ဇာတာရှင်သည် မိခင်၏ အချစ်မြတ်နိုးဆုံးခံရသည့် အငယ်ဆုံး တစ်ဦးတည်းသော သားယောကျာ်းလေး ဖြစ်သည်။ ချစ်မှုရေးရာတွင် မိန်းကလေးများစွာ ၏ ချစ်မြတ်နိုးခြင်း ၊ အနွံတာခံခြင်းကို ခံရသည်။ ယာဉ်ကားများကို ၀ါသနာထုံပြီး၊ ယာဉ်မောင်းဘ၀ဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းများ ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများတွင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ရသည်။ စိတ်ညစ်ရမည့်နေရာတွင် မည်သည့်အခါမျှ ကြာကြာမနေတတ်။ အစဉ်အမြဲ ခရီးသွားနေရခြင်းကို သာ နှစ်သက်သော ဘ၀ပိုင်ရှင်ဖြစ်လေသည်။
တစ်ပတ်နွမ်းကိုလ ..မပြတ်တမ်းတ ချစ်မယ့်သူ
၆ခုကြွင်းဖွား ၊ ရာဟုသား ၊ ရာဇဖွား ဇာတာရှင်
အမည်အမျိုးအစား …. သြကာသ ကာရက အမည်
နာမည်အဖျားစာလုံး သည် မေတ္တာကာရက ဂြိုဟ် ဖြစ်ပြီး …. မရဏဌာနတွင် ရပ်တည်ထားသည်။ နာမည်အဖျားစာလုံး ကျော် .. သည် …လွန်မြောက်ပြီး သော သဘောကို ဆောင်သည့် ပညတ်မျိုးဖြစ်သည်။ မေတ္တာကာရက ဂြိုဟ်လည်း ဖြစ်၊ နာမည်အဖျားစာလုံးလည်း ဖြစ်သော တနင်္လာသည် စနေနှင့် အားကြီးသော အိမ်ချင်းဖလှယ်သည့် ဆက်သွယ်မှု ပြုသည်။
တနင်္လာဂြိုဟ်၏ ရပ်တည်မှု အ၀၀က …ဇာတာရှင်၏ မေတ္တာရေးကို …ပုံမှန်အနေအထားမှ သွေဖီစေသော အာနိသင် တိကျစွာပေးထားသည်။ နာမည်အဖျားစာလုံး မရဏဌာနတွင်ရပ်တည်ပြီး …ပညတ်သဘောအရ လွန်မြောက်ပြီးသောသဘာဝကို ဆောင်နေခြင်းက ….သူ၏ မေတ္တာရေးကို ထူးခြားဆန်းကြယ်လာစေသည်။ ပါဝင်ဆက်နွယ်နေသော စနေဂြိုဟ်၏ ဟောင်းနွမ်းခြင်း၊ အပြစ်မကင်းခြင်း ၊ အိုမင်းခြင်း ပုံရိပ်များက ဇာတာရှင်၏ မေတ္တာရေးဘ၀တွင် လွှမ်းခြုံနေမည်သာ ဖြစ်ပေသည်။
ဇာတာရှင်သည် …. အသက်ငယ်စဉ်မှာပင် …တောင်ပေါ်သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် အကြောင်းပါခဲ့သည်။ ထိုအမျိုးသမီး မှာ သူ့ထက် အသက်အရွယ်ထက်ဝက်ခန့်ကြီးပြီး ၊ အိမ်ထောင်ပျက်ဖူးသူ ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရည်အားဖြင့်လည်း ….ချို့တဲ့သူဖြစ်သဖြင့် …ဇာတာရှင်အမျိုးသား၏ နုပျိုမှု ၊ အဆင်းတင့်တယ်မှု တို့နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် အခြေအနေမျိုးဖြစ်သော ဖူးစာရေးအနေအထား ဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။ ထိုအမျိုးသမီးဖြစ်သူ နေထိုင်ရာ နယ်စပ်ဒေသသို့ လိုက်ပါပြီး အခြေချ နေထိုင်ရသည်။
လက်မရွံ့တဲ့ သူ ……….
ကိုရဲလွင်အောင် ( နာမည်အလယ်စာလုံးတို့ကို ပြောင်းလဲထားပါသည်။)
၅ခုကြွင်းဖွား ..၊ ဗုဒ္ဓဟူးသား ၊ အထွန်းဖွား ဇာတာရှင်
အမည်အမျိုးအစား …. သမ္ပဒါနကာရက အမည်
ထူးခြားချက် ။ ။ နာမည်အဖျားစာလုံးသည် မရဏဌာနနေ တနင်္ဂနွေနံ ဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားပြီး …မေတ္တာရေး ကို ဖော်ပြသော ဆပွတ်ဂြိုဟ် (တနင်္လာ) နှင့် ပက္ခမိထားသည်။ နာမည်အရင်းစာလုံးသည် … လက်မရွံ့မှုကို ဖြစ်စေသော ရာဟုနံ (ရ) ဖြင့် မှည့်ထားပြီး၊ နောက်လှည့်မကြည့်ဘဲ …ထင်ရာစိုင်းမိစေတတ်သော ရာဟုပိုင်သရဖြစ်သည့် (…ဲ) နောက်သို့ပစ် ဖြင့် ပေါင်းစပ်ကာ (ရဲ) ဟူသော ပညတ်ဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားလေသည်။ မင်းပြစ်မင်းဒဏ် သင့်စေနိုင်မှုကို အထူးဖော်ပြသော မရဏ တနင်္ဂနွေဖြင့် နာမည်အဖျားစာလုံးကို ပါ မှည့်ခေါ်ထားခြင်းက …..ဆိုင်ရာဇာတာရှင်အတွက် …ထူးခြားသော အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်လာစေ၏။
သုံးသပ်ချက်။ ။ အမည်အရင်းစာလုံး ၏ လက်ရဲဇက်ရဲ နိုင်စေမှုနှင့် …ထိမ်းကွပ်နိုင်မှု နဲပါးစေသော အခြေအနေကို နာမည်အဖျား စာလုံး၏ အစွန်းရောက်လုပ်ဆောင်မိစေမည့် သဘာဝက ထပ်မံ ပံ့ပိုးပေးထားသည်။ တနင်္ဂနွေသည် အသက်ဂြိုဟ်ဖြစ်ပြီး မရဏဌာနတွင် ရပ်တည်နေခြင်းက …အသက်ကိုသေစေနိုင်သော ဦးတည်ချက်ကို အဓိကဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။ ပက္ခမိထားသော တနင်္လာက …အဆိုပါအခြေအနေများသည် …..(တနင်္လာ သည် ဌာနဂြိုဟ်ဖြစ်သဖြင့် ….နေရာလုပွဲများ ကြောင့်လည်းကောင်း၊ တနင်္လာသည် မေတ္တာရေးနှင့်ဆိုင်သော ဆပွတ်ဂြိုဟ်ဖြစ်သဖြင့် … အချစ်ရေး ..အိမ်ထောင်ရေး နှင့် စပ်လျဉ်းပြီးလည်းကောင်း ..၊) သူတစ်ပါးအသက်ကို သတ်ဖြတ်မိစေသော အဖြစ်မျိုး ကြုံရတတ်သည်ကို တိကျစွာ ဖော်ပြသည်။
လက်တွေ့ဘ၀ကံဇာတာ ။ ။ ဇာတာရှင်သည် နယ်စပ်ဒေသ တွင် လူသတ်မှုတစ်ခု ကျူးလွန်မိခဲ့သည်။ ဖောက်ပြန်သော ဇနီးနှင့် ကြာခိုမှောက်မှားသူ နှစ်ယောက်စလုံးကို ဓါးဖြင့် ထိုးနှက်သေဆုံးစေခဲ့ပြီး ၊ ထောင်ဒဏ်ခုနှစ်နှစ် ကျခံခဲ့ရသည်။
နေလောင်ထားသော နာမည်ရှင် …….
တစ်ခုကြွင်းဖွား စနေသား၊ အထွန်းဖွား ဇာတာရှင် ……. ။
နာမည်အမျိုးအစား ….. ကတ္တုကာရက အမည် …. ။
ထူးခြားချက် ။ ။ စနေသား ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် နာမည်ကို တနင်္ဂနွေ နှစ်ထပ်ဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားသည်။ တနင်္ဂနွေသည် …မူလမွေးဇာတာတွင် ဘင်္ဂ+ဘင်္ဂ ပက္ခ အမျိုးအစား မိနေသည်။ နာမည်တစ်ခုလုံးသည် ပက္ခအပြန်အလှန်မိထားသော အမည်အမျိုးအစားဖြစ်လာပြီး …. တနင်္ဂနွေ (၀ါ) နေမင်း ၏ လောင်ကျွမ်းမှုဒဏ် မကင်းသော အမည်အမျိုးအစား ဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ အဆိုပါ တနင်္ဂနွေသည် ဇာတာရှင် စနေသားအတွက် အကျိုးစီးပွားရှာဖွေရရှိမှု၊ အသက်မွေးမှု ၊ ကို အထူးအစိုးရပိုင်ဆိုင်သော ဂြိုဟ် လည်း ဖြစ်သည်။
သုံးသပ်ချက် ။ ။ ပက္ခမိခြင်းအားလုံးတွင် နေဂြိုဟ်လဂြိုဟ်များ ဖြစ်သော တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္လာ စသည်တို့နှင့် ပက္ခ မိခြင်းသည် ..သတိပြုရမည့် ပက္ခအမျိုးအစား များဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဘင်္ဂတွင် ပက္ခမိသော နံတူပက္ခအမျိုးအစားသည် တနင်္ဂနွေ /တနင်္လာ ဂြိုဟ်တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီး ယင်းဂြိုဟ်ပိုင် အက္ခများဖြင့် နာမည်တစ်ခုလုံးကို မှည့်ခေါ်ထားခြင်းသည် ထိခိုက်မှု အင်အား ပိုမိုပြင်းထန်သည်။ ယခုအထက်ပါဇာတာတွင်လည်း …..အဆိုပါ တနင်္ဂနွေပက္ခသည် …. ဆိုင်ရာဇာတာရှင် စနေသားအား ၊ ………
အသက်မွေးမှု ၊ အသက်ရှင်သန်ရေး နှင့် ကျန်းမာရေး ၊ အလုပ် ၊ အောင်မြင်ရေး ၊ အကျိုးစီးပွားရှာဖွေရရှိရေး စသောကဏ္ဍများ အချင်းချင်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုခြင်း (၀ါ) ….တစ်ခုကောင်းလျှင် တစ်ခုမကောင်း ၊ တစ်ဖက်နင်းလျှင် တစ်ဖက်ထောင် ၊ တစ်ခုအားသာလျှင် တစ်ခုအားနဲ ….ဖြစ်ရခြင်းမျိုး …ဘ၀တစ်လျှောက် ကြုံတွေ့ရစေတတ်သော အနေအထားအဖြစ် ရှင်းလင်းစွာ သိမြင်ရပေသည်။
လက်တွေ့ဘ၀ ကံဇာတာ ။ ။ ဇာတာရှင်သည် ….ဆယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးနောက် စစ်တက္ကသိုလ် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအဆင့် အောင်မြင့်ခါနီး…..အပွင့်တင်ခါနီးဆဲဆဲ တွင် ကျန်းမာရေး ဖောက်ပြန်သည်။ လက်လျော့လိုက်ရသည့် အနေအထားများ ကြောင့် ….တပ်မှနှုတ်ထွက်ခဲ့ရသည်။ နှုတ်ထွက်ပြီး များမကြာမီမှာပင် …ကျန်းမာရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားသည်။ ယခုအခါ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ….အလုပ်လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ (ပက္ခမိထားသော တနင်္ဂနွေသည် …သူ၏ သဘာဝဖြစ်သော ..ဗိုလ်ဖြစ်ခွင့် (၀ါ) ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခွင့် ကံကို …..ပိုင်နိုင်စွာ တားမြစ်ခဲ့လေသည်။ )
စာစု(၂) တွင် စံနမူနာယူစရာ အခြားဇာတာရှင်များနှင့် နာမည်များကို ဆက်လက် တင်ပြရေးသားပေးပါဦးမည်။
Phone ; 01 618 469
Posted by Sayarphone at 10:12 PM Labels: နာမည်အကြောင်း သိကောင်းစရာ , မဟာဘုတ်
ကျေးဇူးပြု၍ … အချစ်ကို လက်မလွှတ်လိုက်ပါနဲ့ …. (ပထမပ...
၁၃၇၄ ခုနှစ် ခုနှစ်ရက်သားသမီး ကံဇာတာ